Ma taqaanaa dumbbells
Laga yaabee inaysan noqonin qalabka ugu nugul qolka jimicsiga, laakiin qoob-ka-ciyaarka ayaa qayb muhiim ah ka ahaa tababarka xoogga - ku dhowaad goob walba oo isboorti oo aad ka fekeri karto - illaa iyo inta jimicsiyadaha ay jireen. Iyagu waa aaladda ugu dambeysa ee loo adeegsado kala duwanaanshaha, iyo muhiimad ahaan, waxay kuu oggolaaneysaa inaad tababarto ...
Qaybaha jirka ee garbaha waa la dhayalsan karaa, halka garbaha looga baahan yahay inay qabtaan howlo aan la tirin karin oo ku saabsan cayaaraha iyo nolol maalmeedka. Waxaa jira sabab sababta loogu yeero "culeys qaadid" halkii laga qaadi lahaa "culeyska" ama "jilibka laaban" culeyska. Intii aad eegaysay ...
Kani waa tiir uu qoray Morgan Campbell, oo qora fikradaha CBC Sports. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan "Fikradaha" qaybta CBC, fadlan tixraac Su'aalaha Weydiinta. Illaa iyo hadda, ma aanan arag sawirro is barbar socda. Sawiradaan waxaa soo diray Ali Kershner, tababaraha waxqabadka Stanford Women '...